स्वस्थ नेपाल Healthy Nepal: नीति ल्याउने मात्र हैन, कार्यान्वयन गरेर देखाउ।
नीति ल्याउने मात्र हैन, कार्यान्वयन गरेर देखाउ।
मदिरा नीति आयो? पहिले कार्यान्वयन गराएर देखाउनुस्। यो चुनौती हैन, आग्रह हो। मन्त्रालयले ल्याएको नियममा केही खोट छैन, राम्रा छन्, उद्देश्य नि राम्रा छन्, मात्र कार्यान्वयन कसरी गरिने हो थाहा छैन। सार्वजनिक सवारी साधनको झ्यालबाट फोहोर फाल्न नपाउने कानुन के भयो, कति कार्वान्वयन भयो, कतिले सजाय पाए? त्यस्तै सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न नपाउने नियम के भयो?
• २१ वर्ष मुनिकालाई मदिरा बेच्न नपाइने। कल्ले र कसरी हेर्छ किन्ने व्यक्ती २१ वर्ष पुगेको छ कि छैन? गाउँमा त यो लागू गर्नै सकिन्न, शहरका रेष्टुरेन्ट, ठमेलका पसल, पबहरुमा कल्ले २१ वर्ष पुग्या नपुग्या हेर्छ र कसरी? नियम आफैंमा भने राम्रो हो, विदेशमा जस्तो शंका लागे पसलेले आईडी कार्ड हेर्ने सिस्टम भए त राम्रो, तर हाम्रोमा व्यवहारमा लागू हुन लगभग असम्भव छ।
• एकजनाले १ लिटर किन्न पाउने। एउटा पसलबाट १ लिटर कि २४ घण्टामा १ लिटर? कस्ले हेर्छ त्यो व्यक्तिले कति किन्यो भनेर? धेरै किन्न खोजे नेपालका पसलेले प्रहरीलाई खबर गर्ला त? ल पसलेले खबरै गर्छु भने पनि खानै मन भएकाले पसलै पिच्छेबाट १-१ लिटर लिएर खान सक्दैनन् होला र? अरु पसलबाट उस्ले कति लियो अर्को पसलेलाई के थाहा?
• रक्सीको बोतलमा बिग्रेको कलेजोको फोटो राख्दैमा कसैले खान कम गर्ला र? चुरोटको खोलमा क्यान्सर लागेको फोक्सोको फोटो राखेर कति जनाले चुरोट छोडे त? यो खानेहरुले यसको बेफाइदा थाहा नपाएर खाएका हुन् र कसैले बेफाइदा भन्ने बित्तिकै वा डर देखाउने बित्तिकै छोड्ने! नेपाली फिल्महरुमा नि मदिरा र चुरोट सेवन गरेको दृश्य पिच्छे 'हानिकारक छ' भनेर लेखिन्छ, नियम अनुसार ठिकै होला तर त्यसले के कति फाइदा पुर्याएको छ, अनुसन्धान विना भन्न गार्है छ। फाइदाजनक हुने भए त हलिउडका फिल्ममा नि अवश्य लेखिन्थ्यो होला, खै कुनैमा नि देखिन्न त।
• विवाह, समारोहमा नि मदिरा निषेधित रे! विहेमा जन्ती बढिमा कती जना जान पाउने नियम छ रे? के त्यो कार्यान्वयन भयो? अनि यो कसरी हुन्छ? कसैको विहे, समारोहमा मदिरा छ छैन कल्ले हेर्न जान्छ? कुनै समारोहमा मदिरा खाइरहेको खबर कस्लाई दिने? खबर गरे प्रहरी कार्वाहिको लागि पुग्ने हो? आफ्नो समारोहमा 'सोसल ड्रीन्क' नि गर्न नपाइने हो?
• विभिन्न सार्वजनिक स्थल, कार्यालय वरिपरि मदिरा बेच्न नपाइने! वरिपरि भनेको कति नजिक हो? अस्पतालको गेटैमा रक्सी बेचबिखन भैरहेको छ, पहिले त्यो उठाएर देखाउनुस्। रक्सी खाएर विरामीका आफन्त, अन्य मान्छे अस्पताल प्रवेश गर्छन्, त्यो रोकेर देखाउनुस्।
नीति ल्याउनु ठिकै हो, तर कार्यान्वयन भएन भने त्यो मजाक बन्न जान्छ। जति कडा नियम हुन्छ, उत्तिकै कडा कार्यान्वयन नभए त्यो कागजको खोस्टा मात्र बन्छ। अनि अर्को कुरा नीति नियमले नै मान्छेले व्यवहार परिवर्तन गर्छन् भन्ने सोच्नु गलत हो। त्यसको लागि जनचेतना जाग्नु, सचेत हुनु, स्वास्थ्यप्रती जिम्मेवार हुनु नि उत्तिकै जरुरी छ।
जे होस्, अर्को राम्रो नियम आउन लागेको रहेछ, कार्यान्वयन भए खुसी हुनेछु, मदिराको नीतिलाई मदिरामै चोपेर फ्याँक्ने हिम्मत कसैले नगरोस्।
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 7:42 PM